Abantwana bakaPrince William kunye noKate uGeorge noCharlotte baqala ikhefu lesiqingatha sexesha - Indumasi
Eyona Indumasi INkosana uWilliam kunye noKate bathatha ikhefu kwimisebenzi yokufunda ekhaya iVeki ezayo
Abantwana beNkosana uWilliam noKate Middleton baseburhulumenteni ngokuseholideyini.Matt Porteous / I-Duke kunye neDuchess yaseCambridge / iKensington Palace nge-Getty Izithombe
I-Duke kunye neDuchess yaseCambridge bebefunda ekhaya iNkosana uGeorge kunye nePrincess Charlotte kulo lonke elase-UK, kodwa iNkosana uWilliam noKate Middleton bazakufumana ikhefu kwimisebenzi yokufunda ekude eqala ngoMvulo, xa abantwana babo beqala iveki yonke ngoFebruwari ikhefu lekhefu .
INkosana uGeorge kunye neNkosazana uCharlotte bobabini bangabafundi eThomas's Battersea, isikolo sabucala esiseLondon. Batshintshele kwimfundo ekude kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, ngenxa yokutshixeka kwe-coronavirus, ke ii-royals ezincinci bezigcina nomsebenzi wazo wesikolo kwikhaya lelizwe laseCambridges, e-Anmer Hall, eNorfolk.
Bhalisela iNcwadana yeRoyals yoMqwalaseli INkosana uGeorge kunye neNkosazana uCharlotte ngoku bakwixesha labo lekhefu.I-AARON CHOWN / IPOLO / AFP nge-Getty Izithombe
INkosana uWilliam kunye noKate bahlala bewenza lula umthwalo wabo xa abantwana babo besekhefini, ngenxa yoko kusenokwenzeka ukuba bayakunciphisa ukuzibandakanya kwiveki ezayo ukuze bakwazi ukuchitha ixesha kunye nosapho.
Nangona iiCambridges zingazukuya eholideyini, baya kuhlala bonwabela ixesha lekhefu eAnmer Hall. INkosana uWilliam kunye noKate baqinisekisa ukuba iNkosana uGeorge, iPrincess Charlotte kunye nePrince Louis bonke bachitha ixesha labo bengaphandle mihla le; IiDuchess zaseCambridge zithethile malunga nokuba kubaluleke kangakanani ukuba abantwana baphume baye kwindalo.
Yibhonasi eyongeziweyo yokuchitha ukutshixa kwindlu yabo yokulala eyi-10 eNorfolk, ebekwe kanye kwiKumkanikazi iSandringham Estate. INkosana uWilliam kunye noKate Kuthiwa baziva besekhaya xa beseNorfolk Ilifa lelizwe, njengoko bekwazi ukunika iPrince George, iPrincess Charlotte kunye nePrince Louis njengesiqhelo ubomi apho. Kwaye ngoku banenjana entsha yokudlala. I-Duke kunye neDuchess yaseCambridge bobabini bavule ngomzabalazo wokufunda emakhaya.IKensington Palace nge-Getty Izithombe
Isiqingatha sekota siza ngexesha elifanelekileyo, njengoko iiCambridges ngokuqinisekileyo zifuna ikhefu. INkosana uWilliam kunye noKate bobabini bathethile malunga nemiceli mngeni yokufunda emakhaya phakathi kobhubhane we-coronavirus, njengoko abazali kufuneka benze uxanduva lokufunda kude kunye nokunakekelwa kwabantwana, ubomi basekhaya kunye nomsebenzi. Ngexesha lokuncokola nabazali e-UK, iiDuchess zaseCambridge zivume ukuba ukufunda kude kuyadina, kwaye kamnandi kakhulu wathi umyeni wakhe yeyona nkxaso yakhe inkulu.
I-9 yokuPhumeza iNew Yorkers kufuneka uyiThathe
Ama-Oprah Abelana ngamaXesha aMothusayo wePrince Harry kunye nodliwanondlebe noMeghan
Kutheni ukutya okupheleleyo kunguVimba weAngriest eMelika
Nantsi indlela yokuba noBudlelwane obuMangalisayo: Iimfihlo ezisixhenxe ezivela kuPhando
Eyona miboniso mihle kwi-netflix yokubukela ukubukela
yintoni inkwenkwezi elandelayo yemfazwe bhanyabhanya ephumayo
fumana inombolo yefowuni yasimahla
Iingoma zamakhwenkwe ezithandekayo
chris christie poll amanani 2015
iAmazon isika amaxabiso okutya okupheleleyo
UAnnie lowrey ezra klein umtshato